Iimilinganiselo zethu | UBuddha Trends Brand - i-Buddhatrends
-Ububele malunga nokugqwesa-
I-brand yethu yakhiwe kwisiseko esiqinileyo sokugqwesa, ukukhawuleza, kunye nokugqiba. Sinyamekela ngokubonelela ngeendlela ezinonophelo ezinxibekileyo zokugqoka kwiindawo ezahlukeneyo zabathengi ngendlela yokuba ubuhle babo, ubuhle kunye nentuthuzelo zigcinwe ngokugqithiseleyo.
-Ukuzineliseka komfundi kunye nokuzonwabisa
Sineenkcubeko eziqhayisayo zokuphucula, ukuphucula ngokuqhubekayo nokunikezela izinto ezintle eziphathekayo ukwenzela ukuba sikwanelise ngokugqithiseleyo abathengi bethu abahloniphekileyo ngamaxesha onke. Sikholelwa ngokunyanisekileyo ukuba abathengi abonwabileyo benza uphawu olumnandi. Ngaloo ndlela, siqhutyelwa ukuba sibe yi-brand-to-brand xa abantu bacinga ukuba baneliseko kwaye banoliseko.
Sinokuzibophezela kokungahambisani nokuziphatha, ukunyaniseka nokuphakamileyo. Siyakhathalela iimfuno zabathengi bethu kunye nesisiseko sokuthenga izinto zabo. Ngaloo ndlela, inqubomgomo yethu yokubuyiselwa imali iyatholakala kwiimeko ezinqabile zokungazinzi ukuqinisekisa ukufumana i-post-class shopping experience.
Siyibhiyozela ukwahlukana kwenkcubeko, ubuntu, kunye neminqweno ekugqibeleni idlale indima ebalulekileyo kwindlela yethu. Ngenxa yoko, iqoqo lethu liquka izinto ezingaphezulu kweengubo ze-500 kunye namakhulu amabhinqa ezenziwe ngezandla ezivela kwihlabathi lonke, kuquka iYurophu, i-Afrika ne-Asia ukuze kufumaneke uluhlu olubanzi lweendlela, iimbono, iinkcubeko kunye namava emfashini.
Cofa apha ukufunda ngeBuddhatrends umbono kunye nomsebenzi okanye ukutyelela yethu Lasekhaya ukudala ukhangelelwano oluhambisana nobuntu bakho!